Philips HR1855 Juicer: သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "Juicers & Fruit Extractors" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
ကုန်ပစ္စည်းPhilips HR1855 Juicerအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
800ml juice capacity
နာမည်ကျော် Philips အမှတ်တံဆိပ်မှ ထုတ်လုပ်သည့် HR1855 မော်ဒယ်လ်အမျိုးအစား ဖျော်ရည်စက်တွင် 700W အားရှိသည့် မော်တာပါဝင်သောကြောင့် သင်ကြိတ်မွှေလိုသည်များကို အလွယ်တကူ ကြိတ်မွှေပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အလျင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် ပျော့သော သစ်သီးဖြစ်စေ မာသော သစ်သီးဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ဖျော်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်း ဖျော်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းမှာလည်း ဆန်းသစ်ပြီး ဝင်ဆံ့နိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၈၀၀မီလီမီတာ ဖြစ်ပါသည်။ စက်အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းစွာ ဆေးကြောနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူများ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခါကြိတ်ရုံဖြင့် ဖျော်ရည် ၂ လီတာခန့်ဖျော်နိုင်ခြင်း
ဆန်းသစ်သည့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် QuickClean နည်းပညာနှင့်အတူ ဖျော်ရည်ဖျော်ပြီးပါက ခရားတွင် တင်ကျန်ခဲ့သည့်အဖတ်များကို ရှင်းစရာမလိုလောက်အောင်ပင် ကြိတ်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ခါကြိ်တ်ရုံဖြင့် ၂ လီတာခန့်ဖျော်ရည်ချည်းသက်သက်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မော်တာမှာ ၇၀၀ ၀ပ်အားကိုအသုံးပြုသဖြင့် ကြိတ်မွှေခြင်း၊ခြေခြင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် စွမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်သည်။
ပြွန်အ၀အကျယ်မှာ ၇၅ မီလီမီတာခန့်ကျယ်ခြင်း
သစ်သီးများထည့်ဝင်ရာ ပြွန်အ၀မှာအထူးကျယ်ပြောသဖြင့် ပန်းသီး၊မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥတို့ကဲ့သို့သော သစ်သီးကြီးများကို ကြိုလှီးစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူထည့်ကာ ကြိတ်ဖျော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များPhilips HR1855 Juicer
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ Philips HR1855 Juicer
This is the first Philips juicer I've had. I wasn't disappointed. It looks good, juices well and is easy to clean.
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အသီးဖျော်ရည်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်ချင်ရင်တော့ Philips ရဲ့ Juicer လေးရှိဖို့လိုတယ်လေ။ ဘယ်လိုအသီးမျိုးမဆို ထည့်ကြိတ်လို့ရပါတယ်။